तारकेश्वर पत्रकार मञ्चको शुभकामना आदान प्रदान तथा विकास बहस कार्यक्रम सम्पन्न – SajhaPana
तारकेश्वर पत्रकार मञ्चको शुभकामना आदान प्रदान तथा विकास बहस कार्यक्रम सम्पन्न
साझा पाना २०७७ कात्तिक ६ गते १८:०४ मा प्रकाशित
६ कात्तिक, । तारकेश्वर पत्रकार मञ्चले बडा दशैं तथा शुभ दिपावलीको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा विकास बहस कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बुधबार जुममार्फत् गरेको कार्यक्रममा करिव ४० जना सहभागीको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य तथा काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ का सांसद् भिमसेनदास प्रधानको उपस्थिति रहेको थियो ।
विशिष्ट अतिथिहरुमा तारकेश्वर नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख भवानी डोटेल धिताल र नागरिक सचेतना समाज नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रदिपचन्द्र गौतमको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा अतिथिहरूमा तारकेश्वर नगरपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिवी, सामाजिक अभियान्ता, खेलाडी, कलाकार, पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भिमसेनदास प्रधानले तारकेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । पूर्वाधार विकासका लागि नगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउन आफुले सहयोग गर्ने वाचा गर्नुभएको छ । प्रमुख अतिथि प्रधानले पत्रकार भनेको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको सचेत नागरिक भएकाले अहिले परिस्थितिमा सरकारले नगरेका कामहरुलाई जनतामा लैजाने काम गरेको छ । अहिले प्रतिपक्ष पार्टी भन्दा पनि पत्रकारको क्रियाकलाप उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो ।
विशिष्ट अतिथि नगर उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले स्थानीय सरकार आइसकेपछि भएका कार्य प्रगति र अबको डेढ वर्षको अवधिमा गर्ने योजनाबारे जानकारी गर्नुभएको थियो । उपप्रमुख धितालले पूर्वाधार विकासमा तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र यो ५ वर्षे अवधिमा धेरैजसो सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रा.डा. प्रदिपचन्द्र गौतमले नगरपालिकासँग विकास निर्माणको कुनैपनि योजना नभएकाले सबैभन्दा पहिला योजना बैंक बनाउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा योजना नभएको बताउनुभएको छ । गुरुयोजना अझैपनि नबनाउने हो भने तारकेश्वरमा विकास निर्माण जनताले सोचेजस्तो नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वडा नं. १ का अध्यक्ष तथा नगर प्रवत्ता विदुर सापकोटाले वडाभित्रका योजनाहरु, भएका कामको प्रगति र आगामी डेढ वर्षको योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वडा नं. २ का अध्यक्ष रविन्द्र केसीले गाउँ परिवेशमा रहेको वडामा विकास निर्माणको कामलाई २४ सै घण्टा नबनी निरन्तर लागिरहेको हुँदा जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो । उनले ३ वर्षमा गरेका काम र अबको डेढ वर्षको आफ्नो योजनासमेत भएको छ ।
त्यस्तै तारकेश्वर ८ का अध्यक्ष मनोजकुमार घिमिरेले पाँच वर्षे आफ्नो कार्यकालमा वडाभित्रका पूर्वाधार विकास निर्माण १०० प्रतिशत नै सम्पन्न हुने बताउनुभयो । अबको डेढवर्षपछि हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले पूर्वाधार विकास निर्माणको योजना जनतामा लैजानु नपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रा. श्यामकृष्ण विष्टले शुभकामना दिँदै पत्रकारहरुको भूमिका र जनताका आवाजहरुलाई तारकेश्वर पत्रकार मञ्चले बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं साखाका अध्यक्ष शान्तराम बिडारीले शुभकामना मन्तव्य दिँदै स्थानीय क्षेत्रका पत्रकारहरु संगठीत भएकोमा धन्यवाद प्रकट गरेका थिए ।
उनले स्थानीय पत्रकारहरुलाई आवश्यक तालिम दिनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं साखा तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
तारकेश्वर पत्रकार मञ्चका सल्लाहकार श्रीराम केसी ‘फुटुंगे, श्रीराम पुडासैनी, महेस जंग कुँवरले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
त्यस्तै हाँस्य कलाकार तथा निर्देशक इन्द्र दोङ लामा खम्बुले शुभकामना सन्देस दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सुरुमा बोल्दै कृषक अभियान्ता तथा बुद्धिजिवी उद्धव अधिकारीले नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था र नेपाल सरकारले ल्याएका योजनाहरुबारे जानकारी गर्नुका साथै तारकेश्वर नगरपालिकाले कृषि र पशुपन्छीमा नेपाल सरकारको योजनाअनुसारको नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य कार्यक्रमका सभापति संस्थाका अध्यक्ष पुकार तिमिल्सिनाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन संस्थाका सचिव रामशरण न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।